Firefox 81 inouya nekuvandudzwa kwakasiyana siyana, asi ino nguva yakatarisana neiyo interface | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri veMozilla ndivo vari kutarisira Firefox webhu browser, kuziviswa munguva pfupi yapfuura kuburikidza nechiziviso kuwanikwa kweshanduro nyowani yeFirefox 81, iyo inouya nezvinhu zvinoverengeka zvitsva.
Uye ndezvekuti kunyangwe shanduro dzekare dzakanangana nekuwedzera zvakavanzika uye ekuvandudza-centric maficha, vhezheni 81 iri kunyanya kunetsekana nekuvandudza mushandisi interface zvinhu Firefox uye ruzivo rwevashandisi muBrowser.
Iyi vhezheni nyowani yebrowser inouya nekuvandudzwa kwakasiyana, kwatinogona kuratidza semuenzaniso kuti ikozvino unogona kumbomira uye kutamba odhiyo kana vhidhiyo muFirefox yakananga kubva kubhobhodhi kana mahedhifoni (kana vaine makiyi), iyo inopa nyore nyore kutonga midhiya kana mune imwe Firefox tab, imwe chirongwa, kana kunyangwe iyo komputa yakavharwa.
Pamusoro pezvinyorwa zvisirizvo (rakasviba uye rakareruka), ine iyi vhezheni, Firefox inopa iyo Alpenglow theme: chimiro chine mavara chemabhatani, mamenyu uye windows.
Uyewo, Firefox 81 inouyawo neimwe shanduko huru yeUI; Mozilla yawedzera rutsigiro rweAcroForm Firefox yakavakirwa-mukati PDF kuverenga. Ipo mafaera ePDF achitsigira mafomu emafomu ekudyidzana, Firefox 81 inobvumidza vashandisi kuzadza, kupurinda, uye kusevha mafomu ePDF akananga mubrowser yavo, pasina chikonzero chekusiyana kwePDF application.
Imwe shanduko inoenderana nePDF ndeyekuti izvozvi yakavakirwa-mukati PDF muoni inosanganisirwa iyo inokutendera kuti utarise mazhinji emafaira ePDF anowanikwa pawebhu pasina kushandisa chokunze chishandiso.
Uye pamwe chete nazvo, zvinoitawo kuti ugone kushanda pane mamwe mafaera ePDF ane masheya anowirirana kupedziswa ne data (senge mafomu).
Pamusoro pezvo, Firefox 81 inouyawo neimwe shanduko huru kumushandisi interface, rinova ganda idzva remubhurawuza rakavakirwa-muPDI muoni.
Kune vashandisi muUnited States neCanada, Firefox iwe unogona ikozvino otomatiki kusevha, kubata uye kuzadza yako kiredhiti kadhi ruzivo, izvo zvinoita kuti kutenga paFirefox kunyatsoita nyore.
Kuchengetedza ruzivo rwakatsetseka, ino inozovhurwa zvishoma nezvishoma kune vashandisi.
Kuti uwedzere kumwe kudzivirirwa, unogona kusarudza kuda kusimbiswa usati wangozadza ruzivo rwekadhi rechikwereti. Izvi zvinoda yako yekushandisa system password (kana zvigunwe zvemunwe, kumeso, kana izwi rechokwadi kana chero yeiyi maitiro akagoneswa). Kazhinji iyi ndiyo password inoshandiswa kuvhura komputa yako. Ndokumbira utarise kuti iyi haisi password yeakaunti yako yeFirefox.
ari vanoshandisa kubva kuAustria, Belgium neSwitzerland ndiani kushandisa iyo vhezheni yeGerman yeFirefox ikozvino ichaona Pocket kurudziro mune yako nyowani tebhu nedzimwe dzakanakisa nyaya pawebhu. Pamusoro peiyo nyowani Firefox tebhu, Pocket inowanikwawo seapp paIOS uye Android.
Chekupedzisira maererano neye bug fixes:
Bhurawuza yemuno HTML5 odhiyo / vhidhiyo zvinodzora zvakagashira akakosha ekuwanika ekugadzirisa:
Audio / vhidhiyo zvinodzora zvinoramba zviripo kune vanoverenga screen kunyangwe kana zvakavanzwa kwenguva pfupi kubva pakuonekwa.
Yakapfuura odhiyo / vhidhiyo uye yakazara nguva yave kuwanikwa yekuongorora vaverengi kwavakange vasati vamboita.
Dzidzo dzinoverengeka dzisina mazita dzakanyorwa zvino, dzichiita kuti dzizivikanwe kune vanoverenga screen.
Vaverengi veScreen havasisina ruzivo rwekufambira mberi kunze kwekunge vakumbirwa nemushandisi.
Mufananidzo-mu-Mufananidzo modhi iri kuwedzerawo nemifananidzo mitsva
Firefox ikozvino inotsigira kuvhura kwakananga kwemafaira neakawedzera .xml, .svg, uye .webp, uye bhukumaki bhaa rinoburitswa roga kana mabhukumaki akaunzwa mubrowser.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 81 inouya nekuvandudzwa kwakasiyana siyana, asi ino nguva yakatarisana neiyo interface
Ruzivo rwakanaka kwazvo. Asi ini ndinofanira kubvunza uye ndinoita sei kuti ndiise Firefox muDebian kubva kumatura uye ndinogara ndichiichengeta ichigadziriswa.
Ini ndinopa OK kune iyo yekuvandudza kweiye PDF muoni, zvakanaka kwazvo,